Iyada oo horumarka joogtada ah ee nolosheena casriga ah, dareen ahaan, heerarka nolosheena ay qaateen mid tayo sare leh. Kani maahan natiijada ka soo baxda dadaallada joogtada ah ee dadkayaga Shiinaha, laakiin sidoo kale waa natiijada dadaallada joogtada ah ee sayniska iyo teknolojiyadeenna. Sidaa daraadeed, waxaan leenahay aragtiyo kaladuwan oo ku saabsan baahida joogtada ah iyo adeegsiga walxaha kala duwan Waxaa jira fikrado kala duwan iyo fikradaha codsi ee waxyaalaha quruxda badan. Sanadihii la soo dhaafay, horumarinta warshadaha Shiinaha waxay ahayd mid deg deg ah, oo fursado horumarineed oo weyn ka heshay warshadaha wax soo saarka Shiinaha.
Iyada oo horumarka joogtada ah ee ganacsiga e-commerce ee Internet-ka, ay la timid saameyn aad u weyn oo ku saabsan howlgalka soo saareyaasha. Marka la eego jawiga asalka ah, haddii soo-saarayaashu rabaan inay ku sii wadaan faa'iidadooda tartan xagga saxaafadda ee tallaabo-tallaabo ah, waxay u baahan yihiin inay isbeddelo ku sameeyaan saddexda dhinac ee adeegsadayaasha, suuqgeynta iyo maareynta. Kaliya iyada oo la ilaalinayo horumarka wakhtiyada lagu baabi'in maayo suuqa.
1. Kala fogee qaabka suuqgeynta dhaqameed
Laga soo bilaabo iibinta alaabada ilaa adeegyada iibinta, xayeysiinta iyo xayeysiinta ayaa suuq geynta shabakadaha iyo suuq geynta afka ah. Isla mar ahaantaana, waxay carqaladeysay hannaanka iibinta. Waagii hore, bixinta ayaa ahayd dhamaadka iibka, hadda waa bilowga iibka. Sababtoo ah dib-u-bixinta dib dambe ma ahan micnaheedu yahay iibinta sheyga, laakiin waxaad haysataa macluumaadka macaamiisha, waa inaad raadraacdaa macluumaadkan oo aad sii wadaa horumarinta agabyada.
2. Fikradaha maareynta hal abuurka ah
Waagii hore, hawlgallo baaxad weyn, illaa iyo inta amarku uu ku gaari karo qiime hooseeya iyo wax soo saar sarreeya, laakiin macmiisha weligood ma sii haysan karaan. Hadda waa xilligii horumarka Internetka oo qiimayaashu hufnaan lahaayeen, oo keenaya kharashyo sarreeya iyo faa'iidooyin hooseeya, iyo xumaanta soo-saareyaasha, taasoo horseedaysa geerida hal-abuurnimada, iyo baqdinta hal-abuurka. Jawiga dibedda ee ay wajahayaan soosaarayaasha xirmooyinka tuubooyinka tuubooyinka ayaa sii noqonaya mid cakiran, iyo dhibaatada hawlgalka ayaa sii kordheysa. Xilligan adag wuxuu dalabka sare saarayaa suuq gelinta. Sida loo hirgaliyo shuruudaha isbeddelka maaraynta iyo hagaajinta iibka, oo ay weheliso dhaqanka maaraynta soo-saareyaasha, soosaarayaasha hose waxay u baahan yihiin inay abuuraan fikrad internetka ah, hirgeliyaan istiraatijiyadda “yareynta kharashyada hawlgalka”, iyo in la dhiso nidaam “falanqayn ballaaran”, sidaa darteed si loo gaaro la-qabsasho deg-deg ah ee deegaanka 3. Xeeladaha si xoog leh ayaa loo taageerayaa.
Maamulka ayaa hagi doona firfircoonaan firfircoon wuxuuna yareyn doonaa halista si wax ku ool ah.